NDỊ ỌRỤ WHATSAPP GA-ENWE IKE IZIPU AKWỤKWỌ MMADO NA IBE HA - AKỤKỌ - 2019
Enweghi ike inweta ozi maka ndi mmadu ajuju na ozi WhatsApp, ma nke a nwere ike gbanwee n'oge na-adighi anya. Dika WabetaInfo ntanetị n'Ịntanet, ndị na-emepụta ọrụ echeworị ihe ọhụrụ na nsụgharị beta nke ngwa gam akporo.
Maka oge mbụ, ihe nrịbama pụtara na nyocha WhatsApp 2.18.120 na-ewu, Otú ọ dị, maka mbipute 2.18.189, wepụtara na ụbọchị ole na ole gara aga, njirimara a enweghị maka ihe kpatara ya. Eleghi anya, ndị ọrụ nke ule ahụ na-ewuli onye ozi ahụ ga-enwe ike izipụ ndị mmadu na-esote na izu ndị na-abịanụ, ma amatabeghị mgbe kpọmkwem nke a ga-eme. Ịgbaso ngwa ngwa gam akporo, ọrụ yiri nke a ga-apụta na WhatsApp maka iOS na Windows.
Dịka WabetaInfo si kwuo, ndị mmepe mbụ nke WhatsApp ga-enye ndị ọrụ abụọ ihe nhazi nke ihe oyiyi na-egosipụta mmetụta anọ: ọchị, ịtụnanya, mwute na ịhụnanya. Ọzọkwa, ndị ọrụ nwere ike ibudata akwụkwọ mmado n'onwe ha.